I-Redmi 8A ivela kwi-TENAA eneenkcukacha zayo eziphambili | I-Androidsis
I-Redmi 8A iya kuhlala ibhetri enkulu ye-5000 mAh nangaphezulu, ngokoluhlu lwe-TENAA
I-TENAA iqinisekisile nje omnye wabachasi ngqo Redmi Qaphela 8 izakufumana kungekudala, kwaye ayisiyiyo enye into ehamba nayo ngaphandle I-Realme XT Pro. Esi sisiphelo sisondela ngokuxhuma kunye nemida, ukuze kwiintsuku okanye kwiiveki ezimbalwa ezizayo kube kuyenza ibe semthethweni kwintengiso.
URedmi, kwelinye icala, ugqibile ukufaka uluhlu Redmi 8A, Olunye udidi oluphakathi oluseza kuphehlelelwa. Esi sixhobo asizukuphakama kubakhuluwa baso ababini kunye nale fowuni sele ikhankanyiwe yeRealme, kodwa iya kubonakala ibhetri yesilwanyana eya kuhlala ngaphakathi. Olunye ulwazi oluya kuqhayisa ngalo, ngokwenxalenye yalo, alukho mbi kwaphela, kwaye zezo sizityhila apha ngezantsi ngenxa yoko kubhalwe ngumzimba we-TENAA wase China kwindawo yogcino lwedatha kutshanje.
Yintoni ebalwa yi-TENAA kukuba iRedmi 8A-ivela ngaphandle kwegama lekhowudi "M1908C3KE" - ine Isikrini esingu-6.217-intshi esine-HD + isisombululo se-1,520 x 720 isisombululo seepikseli. Nangona kungakhankanywanga, le iya kuxhotyiswa ngesinqumleli esincinci esincinci apho i-8 MP sensor iya kubekwa kwi-selfies nangaphezulu. Ikhamera enye ebekwe embindini wepaneli yangemva yi-12 MP.
IRedmi 8A ngasemva
Kukho iprosesa octa-isiseko I-2.0 GHz phantsi kwehod. I-Redmi 8A iza kuza kwi-2GB, 3GB, kunye ne-4GB RAM eyahlukileyo ene-16GB, 32GB, kunye ne-64GB yokugcina, ngokwahlukeneyo. Ifowuni iya kuba nenkxaso yolwandiso lokugcina nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-512GB. Ibhetri ephakathi kwayo, njengoko sibonisile kakuhle, yi-5,000 mAh; Kuya kufuneka ixhotyiswe ngesibiyeli sokutshaja ngokukhawuleza.
Imilinganiselo inikwe njenge-156,3 x 75,4 x 9,4 yeemilimitha kwaye ubunzima buyi-188 yeegram. Uluhlu luthi luzakufika lube mnyama, bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka, pinki, mhlophe, luhlaza, mfusa, ngwevu, kodwa siyazi ukuba mithathu kuphela okanye emine eyahlukileyo eya kubakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi 8A iya kuhlala ibhetri enkulu ye-5000 mAh nangaphezulu, ngokoluhlu lwe-TENAA
Ikhamera kaGoogle kaGoogle inedlelane elitsha: I-OPPO ijoyina inyathelo
IHuawei Nandipha idlula iiyunithi ezingama-200 ezigidi ezithengisiweyo